August 2018 - Chum's Solution Myanmar
Author chumsPosted on August 20, 2018 August 28, 2018 Categories AWS TutorialLeaveacomment on What is security group of EC2 ?
How to create snapshot and restore of EC2 ?
Public cloud ထဲမှာရှိတဲ့ virtual machines တွေကို back up လုပ်ဖို့ဆိုတာက စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလိုပါဘဲ။ Amazon Web Services (AWS) ကနေ နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ Elastic Compute Cloud (EC2) instances ကို ကာကွယ်ဖို့ရန် snapshots ကို ဖန်တီးခြင်း နည်းပညာကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။
snapshot ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းမရှင်းပြခင်မှာ snapshots ဟာ ပုံမှန် backups တွေနဲ့ မတူတဲ့ အချက်တွေကို နားလည်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။snapshot လုပ်တယ်ဆိုတာက AWS instance တစ်ခုလုံးကို အကုန် ကူးယူတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ snapshot ဟာဆိုရင် instance အတွင်းမှာရှိတဲ့ storage volume တွေကို ကူးယူတာတင်မဟုတ်ဘဲ အရင်က snapshot တစ်ခုကိုသာ create လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲ အဲ့သည့် storage blocks တွေကိုပါ ကူးယူတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်တိုးပြီး backup လုပ်သလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး snapshot လုပ်တာဟာဆိုရင် volume တစ်ခုလုံးကို ကူးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ snapshots တွေလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲ အရင် ကူးယူခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာဘဲ modify လုပ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
snapshot ကိုဖန်တီးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဟာဆိုရင် အရမ်းကို ရိုးရှင်းပြီး လွယ်ကူတဲ့အရာတစ်ခုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ account user တစ်ယောက်က EC2 instance တစ်ခုကို ဖန်တီးတဲ့အခါမှာ instance က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Elastic Block Store (EBS) volume တစ်ခုကို ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။
EBS ရဲ့ backup feature ဟာဆိုရင် မိမိ server ကို images ပုံစံ အဖြစ် သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အရာကို “Snapshot” လို့ခေါ်ပါတယ်။ Snapshot တွေဘယ်လိုဆောက်ရတယ် ဆောက်ထားတဲ့ backup file ကိုလဲ ဘယ်လို restore ပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Snapshot တစ်ခု စတင်ဖန်တီးခြင်း
EBS volume ရဲ့ snapshot တစ်ခုကို စပြီး ဖန်တီးလိုက်ရအောင်…..
Snapshot တစ်ခု ပြုလုပ်ဖို့ရန် ကိုယ့် create လုပ်ချင်တဲ့ EC2 instance ရဲ့ instance ID ကို ရွေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် EC2 dashboard အောက်က “Volumes” ကို ရွေးလိုက်ပါ။ “Attachment information” က instance ID ရဲ့ Data တွေကို note လုပ်ထားပါ။
Volume တစ်ခုထက်ပိုခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလိုမျိုးရှာမယ်ဆိုရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိ snapshot လုပ်မဲ့ volume ကို ရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် “Actions” ဆိုတဲ့ menu မှ “Create Snapshot” ကို ရွေးလိုက်ပါ။
EC2 console ရဲ့ “Snapshots” ကနေ မ%
Author chumsPosted on August 13, 2018 August 15, 2018 Categories AWS Tutorial